Ibudata ọ bụla Version nke iMovie - ebe a na ọ bụ!
Ibudata ọ bụla version nke iMovie, Ebe ọ bụ!
Otu nke kasị mma na nke Steti nke nkà ọrụ na-ẹkenam site Apple bụ iMovie na ngwa ma maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na ngwa emewo ahịa site oké mgbe ọ na mbụ tọhapụrụ n'afọ 1999. Ọ bụ n'ezie a video edezi software ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe omume nke ga-ekwe ka ha megharịa videos dị ka kwa ọchịchọ ha. Site iMovie mbụ ka iMovie 10.0.9 e nwere ngụkọta nke 13 nsụgharị na e hiwere ulo oru site na ụlọ ọrụ. A nkuzi-emekọ ole na ole a ma ama nke ha.
Ibudata ọ bụla version nke iMovie
The nsụgharị na ndị dịtụ okenye ndị dịnụ online na ezi ihe bụ na onye ọrụ nwere ike inweta nsụgharị si Apple saịtị iji jide n'aka na ndị ọzọ software weebụsaịtị na-mgbe gara na-needful mere. Onye ọrụ dịkwa mkpa iji jide n'aka na ndị iMovie Download-agbaso maka onye ọ bụla na ihe ọ bụla download nke ụdị dị ka a njikọ nwere iMovie omume uploaded ya site version 2.
Gịnị mere iMovie?
Ọ bụ n'ihi na usoro ihe omume dị otu nke kasị mma na ọkaibe ngwaọrụ ga-eme ka n'aka na ihe kasị mma pụta na-eme enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi results na-unmatchable.
The n'ozuzu nke na mmekọrita na ndị ọzọ omume bụ ndakọrịta ma iMovie na-kụziri site na ike nke Apple na maka otu ihe na online nkwado bụ n'ebe iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe results-nyere welie ọrụ ahụmahụ. The n'ozuzu ahụmahụ na nke a bụkwa ihe ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na mkpokọta akwa ahụmahụ na nke a. Nke a ga-eduga onye ọrụ na-eziokwu na iMovie software omume anụ ntọhapụ ga-ekwe ka ndị ọrụ na nke kacha mma na ọkaibe mmemme ahụmahụ na nke a.
Nsụgharị dị iche iche nke iMovie
Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime nsụgharị nke iMovie na a ga-atụle n'isiokwu na-nju:
The ọmụma bụ dị ka ndị.
Usoro ihe omume e wepụtara na October 22, 2013.
• A ọhụrụ mma nke Mac App ụlọ ahịa zuo e kwukwara.
• The n'ozuzu anya nakwa dị ka okirikiri nhọrọ ukwuu nakwa na e kwalite-eji nke a version.
• All ọhụrụ Macs nakwa na e kwukwara.
Usoro ihe omume nwere ike ibudata site Lee.
Review site n'elu media saịtị
The nyochaa na e gwa site Mac World bụ otu n'ime ndị kasị mma nke mere onye ọrụ kweere na ndị kasị mma na ndị kasị elu usoro e hiwere ulo oru site Apple. Site interface mgbanwe ọsọ ndozi a nyochaa bụ ihe kasị mma na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta na nke a.
Esonụ na ozi ndị dị mkpa banyere usoro ihe omume.
Usoro ihe omume e wepụtara na January 27, 2009.
• iLife 09 na oru na iMovie 9 na maka otu ihe ahụ ọ bụ a n'ọgbọ ọhụrụ nke mgbanwe dị ka ọtụtụ kweere.
• All ọhụrụ Macs e ẹkenam na agbakwunyere n'ime usoro ihe omume.
• N'ime iLife 09 iche iche ịzụrụ ga-eme ka n'aka na onye ọrụ na-pacified mgbe ọ na-abịa ngwa ahịa.
The nyochaa e bipụtara na Gizmodo na ọ na-ekwu na interface na-adịghị gbanwere ka tụnyere iMovie ma delving miri n'ime software na-eme ka a onye ọrụ na-aghọta na Apple gere ntị ka mkpesa nke ọrụ na kasị mma na n'ụzọ. Nkenke nchịkọta akụkọ na elu Dọrọ na dobe bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ na e enyocha ke isiokwu a.
-Esonụ bụ ụfọdụ ihe.
Usoro ihe omume e wepụtara na August 7th, 2007.
• iLife 08 ẹkenam na usoro ihe omume.
• The interface nke iPhoto8 nwekwara e gbanwetụrụ kpam kpam na maka otu ihe mmegolite bụ ọmarịcha.
• The n'ozuzu anya nke usoro ihe omume e mere mara mma na nke a.
The omume nwere ike ibudatara na Apple weebụsaịtị.
E nwere iMovie 8 nyochaa on CNET na-agụ akwụkwọ na-maara nke usoro ihe omume na e agbam onya site Apple na ụdị nke iMovie 8. The niile ọhụrụ atụmatụ nakwa dị ka ọhụrụ Macs ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na ihe omume bụ kasị mma n'etiti ụzọ. The gallery bulite atụmatụ e Itie kasị na nke a.
Na-esonụ bụ ụfọdụ ihe ndị ga-eme ka onu doro anya
Usoro ihe omume e wepụtara na January 10th, 2006.
• iLife 06 e ulo oru na usoro ihe omume.
• Dabere na ọrụ nzaghachi mgbanwe ndị dị mkpa e mere mgbe ọ na-abịa iPhoto na gallery ndokwa.
• Ihe omume e kpamkpam kwalite ka tụnyere iMovie HD 5.
Usoro ihe omume nwere ike ibudata site ebe a.
The iMovie HD 6 Review na-egosi na a top media website bụ obi ụtọ banyere mwepụta na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe gburugburu na ezigbo oge ọnụọgụgụ ndidi turu ọnụ banyere. Dị ka nyochaa usoro ihe omume bụ uru ịzụta na mmekọrita ọhụrụ ndozi.
Usoro ihe omume e wepụtara na January 6, 2005.
• Launch nke iLife 5 bụ otu nke kasị mma na ọkaibe nzọụkwụ iwere na nke a.
• Ihe omume e bundled na iLife 05 ngwugwu ka a dum.
• The niile ọhụrụ interface ga-achụpụ onye ọrụ na-eme ka n'aka na omume bụ onye nke kasị mma na ikwu na n'ozuzu mma iwu nke ụlọ ọrụ.
Usoro ihe omume nwere ike ibudata site Apple Official Download.
Review si macupdate na-egosi na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume ebudatara n'ihi na eziokwu na ka tụnyere iLife 04 na iLife 05 ngwugwu e kwalite aka akwa ịgbatị. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ugwo atụmatụ nakwa ma onye ọrụ ga-enwe ike iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ (ụfọdụ n'ime ha) na-sokwara enweghị okodu ọbụna otu penny.
> Resource> iMovie> Downlaod ọ bụla Version nke iMovie - ebe a na ọ bụ!